အီတလီမှာဘယ်ဘက်လက်ဆွဲအိတ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပုံ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အီတလီမှာဘယ်ဘက်လက်ဆွဲအိတ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပုံ
Ciao! သငျသညျအီတလီနိုင်ငံမှတစ်ဦးတစ်သက်တာ၏ခရီးစဉ်စီစဉ်နေ! ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနုပညာက၎င်း၏အကျင့်ကိုကျင့်၏ကတိတော်များကိုသင် elate နှင့်လာအောင်နှိုးဆွဖို့သောခေတ်ဆန်းနှင့်တစ်မြို့ရဲ့မွေးရပ်မြေဖြစ်ပါသည်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်၎င်း၏မေတ္တာအစားအစာနှင့်အတူ. အီတလီနိုင်ငံ gastronomy ၏စစ်မှန်သောမူလနေရာဖြစ်သည်. ဟင်းပွဲရုံအစားအစာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည်မဟုတ်, သူတို့ဖန်တီးမှုတွေဟာ. သငျသညျအံ့သြစရာကဒီလေဘွေမြို့ရှာဖွေစူးစမ်းနေစဉ်, ဘယ်မှာသင်အီတလီနိုင်ငံလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်?
၎င်း၏လမ်းလျှောက် cobbled လမ်းများ, စိတ်အားထက်သန်မှု၏ palpable ambiance အတွက်စိမ်, ကပုံးတစ်ပုံး-စာရင်း destination သည်စေသည်. သင်သွားသောနေရာတိုင်းသူကိုနှောင့်အရှက်မရှိခံရဖို့လိုလားကြောင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အိတ်ကိုဆွဲယူဖို့ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်? ခရီးဆောင်အိတ်များအခမဲ့နှင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်အီတလီကိုလှည့်ပတ်။ ခရီးသွားနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးသင်အီတလီရှိလက်ဝဲအိတ်များနေရာများစွာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။.
ခရီးဆောင်အိတ်များကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောရိုးရှင်းသောရွေးချယ်မှု, တစ်ဦး layover အပေါ်, လေဆိပ်မှာသို့မဟုတ်သင်ဟိုတယ်မရှိဘဲအခမဲ့တစ်ရက်ရှိပါကဖြစ်ပါသည်. အဓိကအချက်အချာလေဆိပ်၌ဤလွယ်ကူသော option တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ, ဒါပေမယ့်သေးငယ်လေဆိပ်သင်သည်သင်၏ရှေးခယျြသောလေဆိပ်ရမတိုင်မီသင်၏သုတသေနပွု trickier ဖြစ်နိုင်သည်. အီတလီမှာဘယ်ဘက်အိတ်များနေရာရှာရန်လေဆိပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားရောက်ခြင်းဖြင့်ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံး.
မီလန် Malpensa လေဆိပ်ရဲ့ လက်ဝဲဘက်အိတ် Terminal နှင့်များ၏ရောက်ရှိအဆင့်တွင်တည်ရှိသည် 1. ဒါဟာကနေနေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်6နံနက်မှ 10 ညနေ. ကုန်ကျစရိတ်ကွဲပြား, သေးငယ်တဲ့အရာအတွက်, သငျသညျ€ 3,50 အကြောင်းကိုပေးဆောင်ချင်ပါတယ်, ပိုကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်€4နဲ့တစ်ခုချင်းစီအတွက် 24 နာရီ.
ရောမမြို့ Fiumicino လေဆိပ်ရဲ့ လက်ဝဲဘက်အိတ် Terminal နှင့်၏မြေညီထပ်တွင်ဖြစ်ပါသည် 3. ဒါဟာကနေနေ့စဉ်ဖွင့်လှစ် 6:30 နံနက်မှ 11:30 24 နာရီကြာကာလအတွက်ကို item နှုန်း€6အကြောင်းကိုညနေများနှင့်ကုန်ကျမည်.
ဗင်းနစ်မာကိုပိုလိုလေဆိပ်ရဲ့ လက်ဝဲဘက်အိတ်ရုံးမြေပြင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်, access ကိုမှာလေဆိပ် Terminal ကိုအတွင်းအပြင် 1. သူတို့ကနေနေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်ကြသည်5နံနက်ခင်း 10 ညနေ, ဒါပေမဲ့ကြိမ်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ကွဲပြားစေခြင်းငှါ.
ရောမမြို့သုံးခုအဓိကရထားဘူတာရှိပါတယ်, Ostiense, ရိုးမား Termini, နှင့် Roma Tiburtina. ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိအီတလီနိုင်ငံရှိလက်ဝဲအိတ်များသိုလှောင်ရန်ပံ့ပိုးသူများနှင့်သင်ရွေးချယ်သောအခါသင်အမှန်တကယ်ပျက်စီးသည်.
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ရထားမှတဆင့်ဖြတ်သန်း တစ်နေ့တာအတွက်, ထို့နောက် Locker များသွားရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဤဘူတာအားလုံးတွင်ခရီးဆောင်အိတ်များစစ်ဆေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသည်, အချို့သော Self-ဝန်ဆောင်မှု.
သငျသညျ€ 10 နှင့်€တစ်နေ့လျှင် 15 အကြားလစာမှမြျှောလငျ့နိုငျ, ပျမ်းမျှအားဖြင့်. သေးငယ်တဲ့အခြမ်းမှတ်စုအဖြစ်, မီးရထားဘူတာ ထို့အပြင်တစ်နေ့တာအတွက်အစားအစာနှင့်ရေကိုသိုလှောင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်, စက်ဘီးငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံ drawing.
ရထားများသည်ဥရောပနှင့်မီလန်သို့သွားရန်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, အဓိကရထားဘူတာလေးခုရှိတယ်, Milano Lambrate, မီလန် Rogoredo, Milano Centrale နှင့် Milan Porta Garibaldi တို့ဖြစ်သည်.
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ဘယ်ဘက်ခရီးသည်နေရာများတွင်အများဆုံးသိုလှောင်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်နာရီများသည်ကွဲပြားသောဘူတာများနှင့်ကွဲပြားပြီးသင်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှယူရို ၁၀ မှယူရို ၁၅ အထိပေးဆောင်ရမည်။. ထို့အပြင်အလေးချိန်ကန့်သတ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်, အချို့ကိစ္စများတွင်ဒါကြောင့်နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ.
Venezia Santa Lucia သည်ဗင်းနစ်၏အဓိကမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်ပြီးအီတလီရှိဘယ်ဘက်အိတ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။. မီလန်နှင့်ရောမမြို့ကဲ့သို့တူညီသော, ဗင်းနစ်ကမ်းလှမ်းမှု ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောလက်ဝဲအိတ်သိုလှောင်မှု.
တချို့ကအလေးချိန်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအချိန်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်လိမ့်မယ်. self-service ကို Locker စျေးဆိုင်အဆင်ပြေအားလုံးဗင်းနစ်ကျော်ချထားပါသည်.
ခေါ်ဆိုခများ၏သင်၏ပဌမ port ကိုသင်ဟိုတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်, ဘော်ဒါဆောင်, ဘယ်ဘက်ခရီးဆောင်နေရာအတွက် Airbnb သို့မဟုတ်. သငျသညျအထဲက check လုပ်ထားကြပါပြီပြီးနောက်, အများအပြားတည်ထောင်အခမဲ့လက်ဝဲအိတ်စောင့်ရှောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်မေးမြန်းဖို့မကြောက်ပါနဲ့. ၎င်း၏ပုံမှန်အားဖြင့်သာအချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ငွေပမာဏအဘို့ဤမျှလောက်သောသူတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိရန်သေချာပါစေ.
Safe နှင့် Locker တွေအဘို့ရှေးခယျြစရာအကြောင်းကိုရှေ့စားပွဲခုံမှာမေးမွနျးပါ. သင်တစ်ဦးအထမ်းသမားရန်သင့်အိတ်ပေးလျှင်သေးငယ်တဲ့အစွန်အဖျား Leave.
လက်ဝဲအိတ် ပုဂ္ဂလိက ဝန်ဆောင်မှုများ
ဒါကပေါ်ပြူလာဥရောပရွေးချယ်မှုနှင့်ကြယ်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်. ကျနော်တို့အီတလီနိုင်ငံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေနှင့်သူတို့ရောမမွို့ရှိအကိုင်းအခက်များ, မီလန်, Florence, Naples, Pisa, Catania, နှင့်ဘာရီ, သေချာအီတလီနှင့်၎င်း၏နာမည်ကျော်မြို့ကြီးများ၏အားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းရန်အောင်. self-service ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ရှောင်ပါလိုင်းများနှင့်ယူအားသာချက် 24 နာရီစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုများနှင့်, သင့်ရဲ့အိတ်ကို€ 300 အထိများအတွက်အာမခံထားဖြစ်ပါတယ်.
ဤသည်ဗင်းနစ်တစ်ဦးဘယ်ဖက်အိတ် option ကိုတိကျတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
သူတို့ကိုဗင်းနစ်မာကိုပိုလိုလေဆိပ်၏ဆိုက်ရောက်ခန်းမတွင်တွေ့လိမ့်မည်, အဆိုပါဗင်းနစ်စန်တာလူစီယာမီးရထားဘူတာ, အဆိုပါ Piazzale ရိုးမား, နှင့်ဗင်းနစ်ခရုဇ် Terminal. ဒါဟာပါးနသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒေသများထဲတွင်နေရာထားပြီး. ဒါက drop ဖို့ကစံပြရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်နှင့်သွားလာရင်း.
သငျသညျအီတလီနိုင်ငံမှသွားလာနှင့်သင်ဘယ်ဖက်အိတ်တည်နေရာများကိုလိုအပ်သည့်အခါ, ထို့ကြောင့်အညီရှေ့ဆက်စစ်ဆေးထို့ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်. check ကြိမ်, အလေးချိန်ကန့်သတ်စစ်ဆေးပါ, နှင့်ကုန်ကျစရိတ်စစ်ဆေးပါ, ပြင်ဆင်ထားဖြစ်! အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အီတလီနိုင်ငံပျော်မွေ့, အိတ်အခမဲ့.
ကပ်ပါ တစ်ဦးကရထား Save ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးလက်မှတ်ရွေးစရာများကိုရှာဖွေရန်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိလက်ဝဲအိတ်များနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-italy/ ?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
europetravel eurotrip နေမင်း longtrainjourneys သေတ္တာ ရထားခရီးသွား travelitaly